Louisiana anotarisa kuti vavandudze ayo China kutengeserana - China Yangzhong Luck Star chisimbiso
Kufurira unyanzvi ari mafuta, zvemakemikari kugadzirwa uye achitarira mberi avhiyesheni uye Aerospace
Louisiana anoda parlay ayo nesimba mafuta negasi uye kwemakemikari kugadzirwa kunyika rakawedzerwa zvokutengeserana ukama China, napaduku wacho pamusoro zvoupfumi mukuru.
Don Pierson akagadzwa munyori Louisiana Economic Development apo John Bel Edwards akava mubati January. Pierson vati hurumende anoda kuvaka pamusoro wayo tsika maindasitiri - simba uye nemakemikari kugadzirwa, miti uye mukugadzira.
"Tine chivimbo kugamuchira mikana yemberi avhiyesheni uye Aerospace, IT uye mvura zvakanaka," Iye akati bvunzurudzo mu New York musi weChipiri.
Trade pakati Louisiana uye China kwave vachibudirira. Kubvira 2008, Louisiana yakatanga rakava muna US mu paminiti capita wokumwe yakananga mubhizimisi, uye Chinese makambani vakaita basa guru.
China ndiro investor rechipiri pakukura muLouisiana.
China rinomiririra pamusoro ekisipoti musika Louisiana, pamwechete inopfuura $ 8.6 billion muna kunze kwenyika muna 2014, zvinzvimbo zvepamusoro Louisiana No. 4 pakati US rinoti muna kunze kwenyika kune yakaoma.
Pierson akati pane zviviri kuti kuonekwa kuti vaizotibata kunyanya kuwedzera kutengeserana pakati pehurumende uye China. Imwe kugadzira makemikari feedstock akafanana methanol, izvo zvaida kuti kugadzira mushonga zvigadzirwa.
Chimwe kunosanganisira kugadzirwa liquefied negasi, kana LNG, iyo akasika kana negasi iri dzaserera kuti kubvisa 259 ° C.
Muna 2014, Louisiana yakasimbiswa imwe mari pamusoro $ 1,85 billion kubva Shandong Yuhuang Chemical Co kuva methanol chirimwa kuLouisiana raMwari St. James Parish. The Zvivako, iyo iri kutarisirwa kusika 400 mabasa zvechigarire uye vagari kuvakwa mabasa anenge 2,000, riri pasi kuvakwa.
"Tiri kutarisira richasvika pamutsetse uye vanotanga kugadzirwa muna 2017," akawedzera.
Kunyange zvazvo pasi mafuta negasi mitengo kuvhiringidze mamiriro simba kugadzirwa, mutengo ndiwo chaitika kuti makemikari bhizimisi.
"The donhwe mitengo mafuta ikarova dzimwe nzvimbo Louisiana zvakaoma, sezvo tiri nhamba mbiri Mugadziri mafuta negasi muna US," akadaro Pierson.
"Asi nemitengo yakaderera uyewo kusika mukana, sezvo mafuta uye gasi ndivo feedstock makemikari kugadzirwa uye anoshandiswawo kuti simba nzvimbo kuti manufactures yacho feedstock."
Kuwedzera upfumi China kuchaita zvinoda feedstock makemikari zvigadzirwa, uye Louisiana kuti inokosha nzvimbo pamusoro Gulf of Mexico achaita nyore Chinese yemakambani kumisa kugadzirwa ari States uye ipapo anotakura chigadzirwa kudzokera China kuburikidza neHurumende Mapaipi pamumbure kana rumwe ayo zvengarava, akati Pierson.
Louisiana kuti chiteshi kwava pakati pakukura munyika, pamwe 27 deepwater uye kudzika-gwaro zvengarava.